Ukucindezeleka ngaphandle kwehhotela lakho kuya ku-Airport Basel - kusuka ku-40.- CHF
Ukudluliselwa kwezindiza eBasel
Ukudluliselwa kwezindiza Zurich
Service Limousine WEF Davos
Isevisi yeLimousine Art Art Basel
I-Taxi Basel Airport
Isevisi yemoto WEF Davos
I-Basel Airport Transfer
Isevisi yokudlulisa i-360 yehhotela e-Basel
Isevisi yokudlulisa ngqo esangweni lesikhumulo sezindiza noma ehhotela
Uma usufika eBasel esikhumulweni sezindiza noma esiteshini sesitimela, sizobe sithatha ukucindezeleka kokuhamba kwakho. Sikulindele ekugcineni kokufika futhi sikukhulule ngohambo lwakho ngokukunikeza umthwalo wakho kuze kube manje sedan ukusiza. Ukusuka lapho sinikelezela ehhotela lakho noma endaweni yomcimbi. Umshayeli wakho wezinyawo uzokujabulela ukusiza ngemithwalo yakho kuze kufike ekwamukela indawo yehhotela.
Ukucindezeleka-free kusuka ehhotela lakho kuya Airport Basel
Ngokushesha uma ufuna ukuqeda ukuhlala kwakho eBasel bese ushayela esikhumulweni sezindiza, ungena Isevisi yokudlulisa iBaselWena futhi kukhwalithi evamile futhi nazo zonke izinto ezitholakalayo. Kwanele ukuba sikutshele ngesicelo sakho sokudlulisa ngehora elilodwa ngaphambi kokuphuma kwakho ehhotela. Futhi ukuze ungakhathazeki ngokuthola imali yamaphepha emali ngemali yangaphandle, njengenjwayelo, siyajabula ukukunikeza izinkokhelo zekhadi lesikweletu.
Ungenza kalula ukubhuka kwakho ku-intanethi. Sibheke phambili ekwenzeni uhambo lwakho lube mnandi futhi oluphephile.
Ithimba lakho lenkonzo yokudlulisa kusuka eBasel
Kubhalwe ku: Basel sezindiza Shuttle isevisi Limousine
taxi.flughafen March 9, 2017 March 16, 2017 Basel, sezindiza Shuttle, isevisi Limousine Awekho amazwana
← Isikebhe sezindiza seZurich naseBasel
BASELWORLD 2018 - Elula ukuhamba nge-Transfer Service Basel →
Copyright © 2018 , Kunikezwe ngu WordPress, Isihloko: Okubanzi ThemeGrill.